အကောင်းဆုံးနှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက် - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-01 > အကောင်းဆုံးနှစ်သစ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်
ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်ပေးသည့်အရာတစ်ခုမှာသူသည်အရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ အရာရာကိုအချိန်တန်လျှင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာသည်လ၏ပထမ (သို့) နှစ်ဆယ်နေ့တွင်ဖြစ်ပျက်မည်ဟုယူဆလျှင်၎င်းသည်ထိုနေ့၊ နာရီ၊ မိနစ်အထိပင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တိုက်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏အသက်တာသည်အချိန်နှင့်နေရာအရနောက်ဆုံးအသေးစိတ်အထိစီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုမမွေးဖွားမီကပင်ထိုအကြံအစည်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးထိုအရာကိုယေရှုအသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယေရှု၏ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝကိုသက်သေပြသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေရှုနှင့်သူ့ရှေ့မှောက်၌ရှိသောပရောဖက်များကဲ့သို့သူ၏ဘဝသည်မည်သို့တိုးတက်လိမ့်မည်ကိုမည်သူမျှကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ သခင်ယေရှုဖွားမြင်ခြင်းနှင့်သူသည်ကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှစ်ရပ်စလုံးအားပရောဖက်များမတိုင်မီနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကြိုဟောခဲ့သည်။ ဂျူးနှစ်သစ်ကူးနေ့၌ဘုရားသခင်သည်များစွာမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကျမ်းစာသမိုင်းမှဥပမာသုံးခုကိုကြည့်ပါ။
နော Ark သင်္ဘော
Als Noah während der Flut in der Arche war, vergingen Monate, bis sich die Gewässer senkten. Es war am Neujahrstag, als Noah das Fenster öffnete und sah, dass das Wasser sank. Noah blieb noch zwei weitere Monate in der Arche, wahrscheinlich, weil er sich an den Komfort und die Sicherheit, die ihm sein Schiff bot, gewöhnt hatte. Gott redete mit Noah und sprach: «Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir!» (1. ကြွက် 8,16).
Gott gab Mose die Anweisung einen Tempel in der Form eines Zeltes zu bauen. Dies symbolisierte den Ort, an dem Gott mit den Menschen verweilte. Nachdem das Material dafür vorbereitet war, sagte Gott zu Mose: «Du sollst die Wohnung der Stiftshütte aufrichten am ersten Tage des ersten Monats» (2. Mose 40,2). Das Aufbauen der Stifthütte war eine besondere Aufgabe, die für einen besonderen Tag vorgesehen war – den Neujahrstag. Viele Jahre später baute König Salomo in Jerusalem einen Tempel aus festem Material. Dieser Tempel wurde in späteren Zeiten von den Menschen geschändet und missbraucht. König Hiskia entschied, dass sich etwas ändern müsse. Die Priester gingen in den Altarraum des Tempels und begannen ihn am Neujahrstag zu reinigen: «Die Priester aber gingen ins Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und taten alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden wurde, auf den Vorhof am Hause des Herrn, und die Leviten nahmen es auf und trugen es hinaus an den Bach Kidron. Mit der Weihe aber fingen sie am ersten Tage des ersten Monats an, und am achten Tage des Monats gingen sie in die Vorhalle des Herrn und weihten das Haus des Herrn acht Tage lang, und am sechzehnten Tage des ersten Monats vollendeten sie das Werk» (2. Chr ၁9,16-17) ။
Was bedeutet das für uns? Im Neuen Testament spricht Paulus davon, dass wir der Tempel Gottes sind: «Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig – der seid ihr» (1. ကောရိန္သု 3,16)
သင်သည်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်သေးပါကဘုရားသခင်ကသူ၏ဗိမာန်တော်ဖြစ်လာရန်ရပ်တည်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပြီးသူသည်သင့်အထဲ၌ကျိန်းဝပ်လိမ့်မည်။ သငျသညျဘုရားသခငျကိုယုံကွညျနသေူဖွစျလြှငျ၊ သူသညျသူ၏နှုတျမွှကျစကားသညျလေဝိသားတို့အားလွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကပေးခဲ့သောသတင်းစကားနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် - နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်ဗိမာန်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေ။ အမျက်ဒေါသထွက်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း၊ မနာလိုခြင်း၊ ငြူစူခြင်း၊ သောက်ကြူးခြင်းနှင့်အခြားအပြစ်များကြောင့်သင်မစင်ကြယ်ဖြစ်ခဲ့လျှင်ဘုရားသခင်ကသင့်အားသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေ။ နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်စတင်လုပ်ဆောင်ရန်ဘုရားသခင်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ။ မင်းစပြီးပြီလား ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ဖြစ်ရန်သင်၏အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးနှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နှစ်သစ်ကူးအကြိုကိုသင်ပြန်ပြောင်းကြည့်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည် -“ နော like လိုပဲဘုရားသခင်အတွက်သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကမ္ဘာသစ်ထဲကိုနော like လိုငါထွက်ခွာသွားလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်တဲတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သောမောရှေသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဗာဗုလုန်မှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော E ဇရကဲ့သို့ပင်! " ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်ကောင်းသောတစ်နှစ်အလိုရှိ၏